Aripo fembera chii yechirimo inomirira?
kusunungurwa ichi anouya zvishoma manheru purogiramu yedu. Asi kare vakaputsa kuroora zuva Download chinyorwa wedu kuyambuka 500 maka.
Izvi kusunungurwa kunyange zviduku zvakasikwa anoita vamwe zvakanaka kuwedzererwa.
Chekutanga, ari default mutauro yakaiswa muna Transposh zvino mukuru uya kuti yakaitika WP_LANG kugara, ichi kunoita munhu WordPress MU kugadzwa umo ose nzvimbo inogona vakakwanisa neimwe mutauro pamusoro backend. A chinhu mandaifarira kubudikidza pakupedzisira nokubvumira mbudzana yangu kuti ake pachake Blog pachake mumutauro zvaanogona kushandisa.
Takawedzera mumwe TP shortcode kuti inoita kuti goho kuitika transposh mutauro, kunyange hurege unorira zvikuru, ichi kuwedzererwa duku ambotirega kuratidza mifananidzo yakasiyana-siyana mumitauro, unogona kuverenga nezvazvo pano.
An kuwedzera imwe constants shoma edu parser yekubvuma, zvino kubvumira coders (kwete vanozvishandisa) kushandura yedu parser maitiro kutyora mitsara iri hombe akakora, ona musoro parser.php yedu mapepa.
More kuchinja uye tsikidzi nokukoromoka vanosanganisira:
Iframes zvaisanganisira mukati mapeji zvino vanoedza kubatanidza mutauro zvakakodzera
Fixed tsikidzi nezvokushandisa chete =”uye” parameter of TP shortcode yaakaita sizvo detections mutauro panobva mberi parsing
Added shanduro German kubudikidza Jenny Beelens kubva professionaltranslation.com
Nakidzwa shanduro iyi, udza shamwari dzako nezvazvo, regai udza vavengi vako chinhu, bvunza magweta dzako kana uchida zvechokwadi uye musakanganwa kukosha mhuri yako.
PS: Tinoziva pamusoro kwakarongwa Google Translate API deprecation uye plugin vacharamba kushanda, mashoko huchafumurwa mushanduro ramangwana.
mhando 0.7.3 – Shortcodes rutsigiro
Kurume 25, 2011 kubudikidza chipo 55 Comments
Nhasi tine kusunungurwa shanduro 0.7.3 iyo inowedzera rutsigiro shortcodes mukati Wordpress namagwatidziro, Izvi zvinogona kushandiswa kuita zvimwe akashambidzika zvinhu uye yatiri ndakasika vhidhiyo kumusoro, saka kana uine nemaminitsi mashanu vakasununguka uye hapana nani kuita, chete tarisa vhidhiyo. Zvikasadaro tingadai recommand kuverenga zvinyorwa pa http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Vamwe vakawanda tsikidzi unocherekedza vakawedzerwa kusunungurwa ichi, kunyanya kuderedza mutoro (uye duplications) kuti bots asike pamusoro pepeta mapeji, uye kubvisa unneeded chechikamu mafaira nokuda bots.
Nakidzwa shanduro iyi!
Ina Under: General Messages Tagged With: 0.7, kuduku, rusununguko, shortcodes, Video, Wordpress plugin
mhando 0.7.2 – The yechitatu iri kuuya
Kurume 1, 2011 kubudikidza chipo 11 Comments
Happy chechipiri rokuzvarwa nokuda plugin
Zvatichangobva kusunungurwa shanduro 0.7.2 ane shoma tsikidzi unocherekedza uye okuwedzera shanduro nhatu kusvika plugin.
Shanduro Italian ne Marco Rossi
Shanduro Persian ne Sushyant Zavarzadeh
Spanish shanduro ne Angel Torregrosa
makore maviri (uye zuva) kubvira mhando 0.0.1 akasunungurwa uye gore rimwe kubva mhando 0.4.3 akasunungurwa. Mugore rino takava pamusoro 32,000 mutore kana tichienzanisa 13,000 mugore pamberi, uye tine zvakawanda zvinhu uye zvishoma kupfuura akura chigadzirwa.
Taida kupemberera nhasi chete kusunungurwa Marshal basa, asi zvinosuruvarisa ichi chichange kunonoka zvishoma, zvisinei – akazvitsaurira 24GB gondohwe Server iri pakupedzisira kukwira (nemitambo nzvimbo iyi) uye isu nokukurumidza takagadzirira rwakafanana. Kutarisira pfungwa dzenyu, mazano, Mashoko emutsa uye chero yaungada vaposhere kwatiri.
Ina Under: General Messages Tagged With: bhavhdhe, kuduku, rusununguko, Wordpress plugin